Chautari Daily » छक्का पञ्जा २ हेर्नु भयो ? छैन भने अब हेर्नुहोस्
छक्का पञ्जा २ हेर्नु भयो ? छैन भने अब हेर्नुहोस्
काठमाडौं २१ असार / युट्युबमा निक्कै नै प्रतीक्षा गरिएको फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ अन्ततः अनलाइनमा रिलिज भएको छ । दर्शकले अत्याधिक पर्खिएको फिल्मलाई आइफ्लिक्समा हेर्न सकिने बनाईएको छ । लामो समयपछि छक्का पञ्जा २ को प्रतिक्षा सकिएको हो ।
तर पनि युट्युबमा पर्खिने हरुको लागि भने यो पनि निराशाकै खबर हो । आइफ्लिक्समा आएपनि दिपाश्री निरौला निर्देशित फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ युटुवमा भने रिलिज भएको छैन । युट्युबमा यो फिल्म सार्बजनिक नहुदा फिल्म निर्माता दिपकराज गिरिले निक्कै गाली खाईरहेका छन् ।
सम्भवतः युटुवमा पनि मल्टिस्टारर कमेडी फिल्म छिट्टै रिलिज हुनेछ । फिल्ममा दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, शिवहरी पौडेल, प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, वर्षा राउत लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्मले सार्वजनिक प्रदर्शनमा दर्शकको साथ अत्याधिक पाएको थियो ।
प्रकाशित मिति २१ असार २०७६, शनिबार ०७:३९